मेरी पुलिस दिदी घाटामा सुरक्षा दिइरहेकी छे
मेरी दिदीलाई कोरोना लाग्यो । मेरी दिदी पुलिस हो । पुलिसलाई कोरोना लाग्यो ।
कोरोनाले मेरी दिदीको जिन्दगीलाई जिस्क्यायाे । अरुले जिस्क्याएको भए गाली गर्न मिल्थ्यो, 'तेरो घरमा दिदीबहिनी छैनन् ?'
दिदीबहिनी नभएको कोरोनालाई के भनेर गाली गर्नु ?
तर, दिदीलाई यो कोरोना कोबाट सर्‍याे होला त ?
त्यो बेला सडकमा ड्युटी गर्दैगर्दा एउटा मोटरसाइकल दुर्घटना भएको रहेछ । मोटरसाइकलबाट लडेका दुई केटाहरूलाई दिदीले उठाएर अस्पताल पुर्‍याएकी रै'छ । ती केटाबाट पो सर्‍याे कि ! तर, ती केटाहरूलाई त उनीहरूलाई मद्दत गर्ने पुलिस को थियो भन्ने याद पनि छैन होला । उनीहरूका लागि त उनीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याउने कोही पुलिस थिए । ड्युटी गरे । सरकारले त्यै ड्युटी गरेबापत त पैसा दिन्छ । हामीले तिरेको करबाटै तिनीहरूले तलब पाउने हो । सक्कियो ।
नेपाल सरकारले मेरी दिदीलाई ३० दिन/रात ड्युटी गरेबापत मासिक तलब २० हजार २ सय रुपैयाँ दिन्छ ।
घर पुगेर दिदी दु:खी हुँदै सासूआमालाई भनी, 'मेरो भाइजस्तै दुइटा भाइहरू आज बाइकबाट लडे । अस्पताल पुगेर आउँदा ढिला भयो । तिनीहरूलाई केही नहोस् !'
यो प्रार्थना पनि त्यै २० हजार २ सयभित्रै पर्छ ।
देशमा 'जनयुद्ध' भयो ।
'हान् हान् हान् । त्यसलाई गोली लागेको छ । छट्पटाउँदै छ । तर, जिउँदै छ । आँखामै ताकेर हान् ।' पेटभरि गोली लागेको पुलिसलाई माओवादीले आँखामा गोली थपे ।
राजतन्त्र बचाउन खोज्ने पुलिस मर्‍याे ।
दुस्मन मर्‍याे ।
सरकारको खातामा एउटा शहीद थपियो । माओवादीको खातामा एउटा विजय थपियो ।
(म माओवादी थिएँ भने कसलाई गोली हान्थेँ हुँला ?)
त्यतिखेर शहीद हुँदा पुलिसको परिवारले पाउने रकम ८ लाख रुपैयाँ थियो । नेपाल सरकारले मेरी दिदीलाई ३० दिन/रात ड्युटी गरेबापत मासिक तलब २० हजार २ सय रुपैयाँ दिन्छ ।
कोरोना लागेको कुरा दिदीले माइततिर कसैलाई भनिन, काठमाँडौ बस्ने उसको भाइलाई बाहेक । माइतमा बुढा बाआमा आत्तिन्छन् भन्ने पिरले होला । त्यसमाथि पुलिसलाई कसरी कोरोना लाग्न सक्छ ?
पुलिससँग त सबै डराउँछन् ।
डरलाई कसरी कोरोना लाग्न सक्छ ?
अनि पुलिसले दुख्यो भनेको कहाँ सुहाउँछ ?
महिनौँ लगाएर त्यत्रो तालिम केका लागि दिएको ?
त्यै दु:ख लुकाउनलाई हैन ?
देशमा २०६२/६३ मा विशाल जनआन्दोलन भयो ।
'हान् हान् हान् । ढुङ्गाले हान् । लात्तले हान् । फुटा त्यसको टाउको । हामीमाथि गोली चलाउने यिनै हैनन् ? ढुङ्गैले किचेर मार् ।' आन्दोलनकारीको ढुङ्गाले टाउको फुटेको पुलिस पिचमा लडेको थियो । आन्दोलित आन्दोलनकारीले झन् ढुङ्गा थपे ।
लोकतन्त्र ल्याउन नदिने पुलिस ढल्यो ।
राजा उभ्याइरहन खोज्ने पुलिस ढल्यो ।
(२०६२/०६३ मा मैले ढुङ्गा हानेका पुलिस कसका दाजु थिए होलान् ?)
कोरोनाले थलिँदा दिदीलाई यति फाइदा भयो कि उसले भान्जाभान्जीलाई दिनरात परैबाट भए पनि हेरिरहन पाई । भान्जा र भान्जीको अनलाइन क्लास चलिरहेको थियो । त्यसका लागि दिदीले मोबाइल डाटामा महिनाको ५ सय रुपैयाँ तिरी । नेपाल सरकारले मेरी दिदीलाई ३० दिन र राति ड्युटी गरेबापत २० हजार २ सय रुपैयाँ तलब दिन्छ ।
देशबाट राजा फालिए । जङ्गलबाट आएकासँग मिलेर सडककाहरूले राजालाई जङ्गल पठाए ।
पुलिस अब नेपाली जनताका भए । मधेस आन्दोलन सुरु भयो । मधेसको एउटा आन्दोलनमा खेदीखेदी पुलिसहरू मारिए ।
‘एकतन्त्र’ बचाउन खोज्ने पुलिस मारिए । जनताका पुलिस जनताद्वारा मारिए ।
(आन्दोलनमा नभएर तिनै प्रहरी मधेसको त्यही गाउँ घुम्दै आएका भए मारिन्थे होला ?)
कोरोना लागेकै बेला दिदीले भान्जा र भान्जी दुई जनाको स्कुलको शुल्क मासिक ८ हजार रुपैयाँको दरले तिरी । घरको खानाखर्च महिनाको ८ हजार रुपैयाँ भएछ । ४ हजार ७ सयजति खानाखर्च उसको राशन खर्चबाट आउने भएकाले खानामा ३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो ।
सुरुमा त कोठा लिएरै बसी । तर, भान्जाभान्जी हुर्किंदै गरेपछि दिदीभिनाजुले ऋण गरेर एउटा सानो घर बनाउनु भयो । दिदीले ऋणको मासिक किस्ता ६ हजार तिरी । मोबाइल पुरानो भएर बिग्रिरहन्छ । दसैँसम्म अर्को नकिन्ने अरे । फलफूल माछामासु पाहुना हुन् । भान्जाभान्जी खासै बिरामी हुँदैनन् । रोगलाई पनि थाहा छ, यी केटाकेटी क्यै गरी बिरामी भैहाले भने फेरि ऋण काड्नुपर्छ । फेरि किस्ताको पैसा । रोग बुझकी छ ।
देशमा गणतन्त्र आयो । जसले पुलिसहरूलाई पैले मार्न खोज्थे, अब पुलिसहरूले उनीहरूकै सुरक्षा दिनुपर्ने भयो ।
गणतान्त्रिक सरकारविरुद्ध फेरि सडकमा आन्दोलन भयो । माथिबाट पानीको फोहोरा चलाउने आदेश आयो । पुलिसहरूले फोहोरा चलाए । भीड तितरबितर भएन । आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोडे । माथिबाट लाठीचार्ज गर्ने आदेश आयो । पुलिसहरूले लाठीचार्ज गरे । आन्दोलनकारीले पुलिसलाई ढुङ्गाले हाने । एक पुलिस हुत्तिएर आन्दोलनकारीतिर पुगे । आन्दोलनकारीले फुटबल जसरी सडकमा लात हान्दै गुडाए ।
गणतन्त्रको जय भन्नेहरूले जय नेपाल भन्नेहरूलाई थङ्थिलो हुञ्जेल कुटे ।
(म गएको आन्दोलनमा ममाथि बल प्रयोग गर्नेलाई म छोड्छु होला ? मेरो जायज आन्दोलनमा मैले जे गरेँ, त्यो नै जायज होला नि । जायज आन्दोलन रोक्न खोज्ने हरेक बल नाजायज हो । मैले पुलिसको घर गएर रिस पोख्या हो र ?)
लाठीचार्जमा मेरी दिदीले पनि एउटा भाइको घुँडा मुन्तिर लाठ्ठीले हानी । हुत्तिएर त्यो भाइ लड्यो । पिचमा । टाउकोमा चोट लाग्यो । निधारबाट तररर खुन बग्यो । दिदीले उसैलाई फेरि एम्बुलेन्समा हालेर अस्पताल पठाई । राति घर फर्किँदा बाटोभरि त्यो भाइको अनुहार सम्झिई । तिहारमा उसले उसकाे भाइको निधारमा लामो सप्तरङ्गी टीका लगाइदिएकी थिई । अनि उसैको लट्ठीले घाइते भएको भाइ सम्झिई । उसले आफ्नो भाइको निधारको सप्तरङ्गी टीकाबाट रातो रङ तरर बगेको देखी ।
उसले उसको भाइलाई भिडियो कल गरी । अनि आन्दोलनका बारेमा केही भनिनँ ।
दिदीले हरेक महिनाजस्तै माइतमा बुबाको मोबाइलमा २ सय रुपैयाँको रिचार्ज हालिदिई । वर्षौंपहिले 'म पुलिसमा लाग्छु' भन्दा खुसी भएका बुबाको अनुहार सम्झिई । उसले गाउँकी निर्मला दिदी पुलिसमा लागेर नीलो बर्दी लगाएको देखेकी थिई । आइरन लगाएको त्यही चिल्लो नीलो बर्दीले ऊभित्र पुलिस हुने रहर जगाएको थियो । ऊ कसैलाई मार्न कुट्न पुलिसमा लागेकी थिइनँ । राजतन्त्र होस् कि लोकतन्त्र होस् कि गणतन्त्र होस्, उसलाई खासै फरक पर्थेन । ऊ केवल पैसाका कारणले भान्जाभान्जी भोकले र रोगले नमरून् भन्ने चाहन्थी ।
पुरानो कुरा सम्झिँदै उसले बुबासँग लामो कुरा गरी । तर, आन्दोलनका बारेमा केही भनिनँ । कमजोर भएको नदेखाउनका लागि उसलाई महिनौँको तालिम दिइएको छ ।
उसलाई कसरी सहने भन्ने महिनौँको तालिम दिइएको छ । धुलो सहने । पानी सहने । घाम सहने । निन्द्रा सहने ।
दसैँमा अरुलाई घर पठाएर आफू सडकको धुलो सहने । छोरी बिरामी हुँदा पनि ड्युटीमै बसेर आँखाको अमिलो सहने ।
हिजो आज काठमाडौंको बाटोमा उभ्याइएका ट्राफिक पुलिसका पुतलाहरू देख्छु । केही पुतला महिला ट्राफिक प्रहरीको देख्छु । ती पुतलालाई घाम र धुलोले खाइरहेझैँ देख्छु । स्वरसम्राट नारायणगोपालकी पत्नी पेमाला जब जाडो महिनामा वा पानी परेको बेला पतिको सालिक देख्नुहुन्थ्यो, तब 'चिसो लाग्यो होला, स्वेटर लगाइदिऊँ' जस्तो लाग्थ्यो रे । ती पुलिसका पुतला देख्दा मलाई त्यस्तै हुन्छ । मलाई नुहाउन कर गरिरहने दिदीको कपाललाई धुलोले पुर्‍याेजस्तो लाग्छ ।
अरुलाई पुतला केही नलाग्दो हो । जिउँदा प्रहरी नै रातभरि अनिदो रहेको देख्दा, धुलो, पानी, घाम खाइरहेको देख्दा लाग्दो हो, पुलिस हुन् । यै त ड्युटी हो । सरकारले त्यै ड्युटी गरेबापत त पैसा दिन्छ । हामीले तिरेको करबाट त तिनीहरूले पैसा पाउने हो । सकियो ।
नेपाल सरकारले मेरी दिदीलाई ३० दिन र रात ड्युटी गरेबापत २० हजार २ सय तलब दिन्छ ।
यतिखेर मेरी दिदी ड्युटी जाने बुटमा काली दल्न लागेकी हुँदी हो । तर, काली सकिन लागेको हुँदो हो । ऊ बट्टा पुछपाछ पारेर काम चलाउँदी हो । बुट टलक्क टल्काउँदा हरेक १० दिनमा एक बट्टा काली सकिन्छ । महिनामा ३ बट्टा । काली बुटको राशन हो । बुटको मासिक राशन खर्च १ सय ५० हो । हरेक महिना बुटमा जति खर्च हुन्छ, यति खर्च त ऊ आफ्नो टाउकोमा पनि गर्न पाउँदिनँ ।
नीलो बर्दी लगाएर बुटमा काली दल्दा उसलाई पुलिस भएको मज्जा लाग्छ रे । ऊ बुट टल्काउञ्जेल हरेक दिन उसको भाइको प्रहरी कविता सुन्छे रे :
'… यो देशको भेट्नु बनेर म झुप्पाको सुरक्षा गर्छु
सधैँ फेद बनेर टुप्पोको सुरक्षा गर्छु
मलाई नै ढुङ्गा हान्ने हातहरूको सुरक्षा गर्छु
ढुङ्गाले लाग्ने टाउकाहरूको सुरक्षा गर्छु
म मन्दिरबाहिर बसेर
मन्दिरभित्रका ईश्वरहरूको सुरक्षा गर्छु…।'
बुट टल्किन्छ । नीलो बर्दीमा ऊ ड्युटीमा निस्किन्छे । र, हरेक पाइलामा एक महिनाको तलब र खर्च जोडघटाउ गर्छे ।
अनि थाहा पाउँछे– ऊ त हरेक महिना घाटामा सुरक्षा गरिरहेकी रहिछ ।
दुई छोराछोरी, पति र सासूसहितको पाँच जनाको परिवार । ३० दिनरात, चौबीसै घण्टा तैनाथ हुनुपर्ने जागिर । २० हजार २ सय तलब ।
ऊ हरेक महिना सिधासिधा घाटामा यो देशको सुरक्षा गरिरहेकी छे ।
ऊ हिँड्दाहिँड्दै एक्कासि एउटा गाडी हुइँकिन्छ । सेतो प्लेटमा रातोले नम्बर लेखेको गाडी । त्यो गाडीले उसले बुटमा दलेको कालीभन्दा कालो धुवाको मुस्लो फालेर जान्छ । धुवाँले उसको आइरन गरेको चिल्लो नीलो बर्दीलाई कालो बनाइदिन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १९, २०७८, ११:५१:००